Yiziphi izinhlobo zenethiwekhi ejwayelekile ye-tie Yi networkrail?
1. Uhlaka lwama-guardrail net Uhlaka lwama-guardrail net lubizwa nangokuthi “uhlobo lohlaka lwensimbi lokulwa nokukhuphuka”, “igridi yokuhlukanisa ifreyimu” njalonjalo. Kungumhlangano wemikhiqizo eguquguqukayo kakhulu, ifreyimu yensimbi yokubamba inetha esetshenziswa kabanzi, edumile kune-general guardrail net high, ...
Ububanzi besicelo senetha lokuvikelwa kwentambo
Ngocingo oluhlabayo, olwaziwa nangokuthi ucingo locingo, ucingo lokuhlukaniswa ngocingo, inetha locingo oluhlabayo. Ingabe iqoqo lezokuphepha, elihle, ukuvikelwa kwemvelo, elisebenza ngohlobo olusha lwenetha locingo. Intambo yensimbi yensimbi ifakwe ngekhwalithi ephezulu yekhabhoni yensimbi yensimbi, Ukuhlukaniswa ngokwelashwa kwendawo: black protectiv ...
Ucingo oluhlabayo emkhakheni wokuthuthukiswa komkhakha wezokwakha
Manje imboni yezokwakha ithuthuke ngokushesha. Abanye abakhi bezakhiwo ezinkulu basebenzisa izindlela ezintsha zokwakha ezakhiweni eziphakeme kakhulu, kumasifundisane nakwezinye izindawo. Ukusetshenziswa kwamanetha okwakha, ucingo oluhlabayo namanye amanetha ukufaka esikhundleni sokubopha ngesandla kwe-rebar kusetshenziswe kabanzi ku-construc ...